Nanambara fanjakana tsy misy COVID voalohany tany Eropa i Montenegro
Home » Toerana fitsangatsanganana » Nanambara fanjakana tsy misy COVID voalohany tany Eropa i Montenegro
Ny praiminisitra Montenegro Dusko Markovic
Ny praiminisitra Montenegro Dusko Markovic dia nanambara tamin'ny Alatsinainy fa ny repoblika Balkanana misy olona 620,000, izay miankina betsaka amin'ny vola azo avy amin'ny fizahan-tany manamorona ny morontsirak'i Adriatika, dia hanokatra ny sisintaniny amin'ireo mpandeha avy amin'ny firenena izay mitatitra tranga tsy mihoatra ny 25. Covid-19 aretina isaky ny olona 100,000 XNUMX - ao anatin'izany i Kroasia, Albania, Slovenia, Alemana ary Gresy.
Tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety taorian'ny fihaonany tamin'ny komity iray voatendry hiady amin'ny valanaretina, dia nanambara i Montenegro ho fanjakana tsy misy COVID-19 i Montenegro. Nanomboka ny valandresaka ho an'ny vaovao ny PM tamin'ny fanalana ny saron-tava.
"Nandresy ny ady tamin'ny viriosy mahatsiravina toy izany ary lasa firenena tsy misy korona-virus voalohany eto Eropa i Montenegro," hoy i Markovic tamin'ny mpanao gazety.
Ny fanambarana dia tonga 69 andro taorian'ny nitorian'i Montenegro ny raharaha COVID-19 voalohany ary rehefa afaka 20 andro tsy nisy tranga vaovao.
Tamin'ny voalohan'ny volana martsa, nanidy sisintany, seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo i Montenegro, nanakatona sekoly ary nandrara ny fivorian'ny besinimaro sy ny hetsika ivelany. Nihena tsikelikely ny famerana nanomboka ny 30 martsa.
Montenegro dia nitatitra tranga 324 voamarina fa marary COVID-19 ary olona sivy no maty.
Espaniôla hampitsahatra ny quarantine mandritra ny tapa-bolana tsy maintsy aloa ho an'ireo vao tonga amin'ny 1 Jolay
Alemana dia nanaiky ny 'fonosana fanamafisana' € 9 lavitrisa ho an'i Lufthansa